Xog ku saabsan iskuullada dowladdu lasoo wareegtay – AwKutub News
Xog ku saabsan iskuullada dowladdu lasoo wareegtay
Leave a Comment on Xog ku saabsan iskuullada dowladdu lasoo wareegtay
Wasaaradda Waxbarashada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay shalay la wareegtay 24 iskuul oo ku yaalla magaalada Muqdisho, tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda ee dib loogu soo nooleynayo waxbarahsada dadweynaha.
Munaasabadda daahfurka barnaamijkan oo Madaxweyne Farmaajo kasoo qayb galay, waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay manhajka midaysan ee waxbarashada iyo xarumo lagu tababaro macallimiinta oo laga hirgelin doono magaalo madaxdyada dowlad goboleedyada.
Halkan waxan idinkula wadaagi doonnaa xog kooban oo ku saabsan 24ka iskuul ee doladdu lasoo wareegtay.
Yaa ka faa’iideysan doona mashruucan?
Mashruucan waxaa ka faa’iideysan doona 4,813 oo ka kooban 401 fasal, kuwaas oo lacag la’aan wax ku baran doona.
Waxaa sidoo kale mashruucan ka faa’iideysan doona 58 maamule, 713 macallim oo mushaharaadkooda toos dowladdu u bixin doonto.
24ka iskuul maxay kaga duwanaan doonaan iskuullada kale?
Ardayda wax ka barata iskuullada dowladdu lasoo wareegtay waxay nasiib u yeelan doonaan in ay helaan:
Waxbarasho tayo leh.
Ex Aqoon Darseed.
Agoonta Wiilasha Kaaran.
iyo Macalin jaamac.
Tags: Soomaaliya Wararka Waxbarashada
Previous Entry Dalka Canada oo jinsiyadda kala laabtay Hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi
Next Entry Madaxweynihii hore ee DDS Cabdi Maxamuud Cumar oo Cafis dalbaday